ကိတ် Hudson ပထမဦးဆုံးကိုယ်ဝန်ကြေညာချက်အပြီးအများပြည်သူ event မှာထငျရှားလေ
"10 နေ့ရက်များအတွက် Guy ဆုံးရှုံးဖို့ပုံ" ရုပ်ရှင် "အရူး၏ရွှေ" တွင်မိမိအလုပ်ကျော်ကြားလာပြီးသူကျော်ကြား 38 နှစ်အရွယ်မင်းသမီး Kate Hudson, မကြာသေးမီကသူမ၏တတိယကိုယ်ဝန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဒီနေသော်လည်းကိတ်တက်ကြွစွာလူမှုရေးဖြစ်ရပ်များတွင်ပါဝင်ရန်ဆက်လက်နှင့်ဟောင်ကောင်တစ်ခုမကြာသေးမီခရီးစဉ်ကြောင်း၏သက်သေဖြစ်ခဲ့သည်။
Hudson အားလုံးသန့်စင်ပြီးလမ်း hit
38 နှစ်အရွယ်မင်းသမီးများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံသို့ခရီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု format နဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိတ်က Harry Winston ကိုခေါ်လက်ဝတ်ရတနာ Boutique ၏ဖွင့်ပွဲမှာဂုဏ်အသရေ၏ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ခံရတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ် Hudson အတွင်းခံရဲ့ style အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အဆင်းလှသောအနက်ရောင်ဝတ်စုံအတွက်ထင်ရှား။ , အဆိုပါထုတ်ကုန်နက် neckline ခဲ့သည့် elongated အမတ်မတ်, ပွင့်လင်းနောက်ကျောနှင့်တစ်ခုအချိုးမညီအနားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆုနည်းနည်းအရောင် nyudovogo တစ်စားဆင်ယင်ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ထားသည်သိမ်မွေ့ဇာမှတဆင့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမပြခဲ့ဘူးသောစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအရာ။
အဆိုပါလက်ရာမြောက်သောမှဖြည့်စွက်နှငျ့ ပတျသကျ. တစ်ခုခုကိတ်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်သည်လက်ဝတ်ရတနာအိမ်သူအိမ်သားက Harry Winston ထံမှလည်ဆွဲနှင့်လက်ကောက်များပါဝင်သည်ဟုသေးငယ်တဲ့လက်ပတ်နာရီနှင့်လက်ဝတ်ရတနာအစုံနှင့်အတူအနက်ရောင်ဖိနပ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောထှနျးမတ်မတ်နှင့်အတူမင်းသမီးလည်း pompous ပုံစံနှင့်တောက်ပမိတ်ကပ်စေခဲ့ပါဘူး။ ကိတ်ညာဘက် combed, အနက်ရောင်မှင်နဲ့ပန်းရောင်နှုတ်ခမ်းနီများနှင့်ဖြောင့်ဆံပင်ကန့်သတ်ခဲ့သည်။
ကိတ် Hudson တစ်ဦးရေကူးဝတ်စုံနဲ့အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဝမ်းပြသ
ကိတ် Hudson ဝက်ခြံနှင့်အတူရုန်းကန်နေတာဖြစ်ပါတယ် ... ?
"ဟုသူမကငုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ Hudson ကိုကြည့်ဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: 38 နှစ်အရွယ်မင်းသမီး၏ဓာတ်ပုံများအင်တာနက်ပေါ်ရှိသည်ထင်ရှားပြီးနောက်သူမ၏ပရိတ်သတ်များအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကဒီမှာအစီအစဉ်ရဲ့ရေးထားပြီ။ ကိုယ်ဝန်ငါသူမ၏ဆံပင်ညှပ်မကြိုက်ဘူး, ကိတ်ငြိမ်းချမ်းသောနှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းကြည့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း "", သူမရဲ့ဖြစ်လာသည်။ စားဆင်ယင်များ၏မဟုတ်ဘဲရဲရွေးချယ်မှုနေသော်လည်းသူမတစ်ဦးကျိုးနွံလမ်းထဲမှာပြသခဲ့သည်။ ကောင်းသောစိတ်ကူး! "," အစဉ်မပြတ်ငါကိတ်ကြိုက်တယ်ပါတယ်။ ငါ့အဘို့ကရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းကစား, ဒါပေမယ့်လည်းစတိုင်မတ်မတ်ကောက်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်မသာသောအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆုဖြစ်ပါသည်။ ဟောင်ကောင်ရှိပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဒီအတည်ပြုချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါကချစ်ကြ! "စသည်တို့ကို
ယင်းက Harry Winston နှင့်အတူကိတ်
2000 ကနေ 2007 ခုနှစ်မှနာမည်ကြီးမင်းသမီးသတိရပါခရစ်ရော်ဘင်ဆင်ဖို့လက်ထပ်ခဲ့သည်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်4နှစ်ပြီးနောက်စုံတွဲတစ်ဦးပထမဦးဆုံးမွေးဖွားခဲ့သည်, တစ်ကမ္ဘာလုံးအမည်ရှိသောသူရှိခဲ့ပါတယ်။ Hudson အတွက်လာမယ့်အဓိကဝတ္ထု4နှစ်ကြာမြင့်ရာမဿဲ Bellamy, နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ 2011 ခုနှစ်မှာတော့သူတို့ Bingham အမည်ရှိသူတစ်ဦးသားခဲ့သညျ။ Lightwave Records ကိုတည်ထောင်သူ - တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, သူ Cate သူမဒန်နီ Fudzikava တွေ့ဆုံကြေညာခဲ့သည်။
ခရစ် Robinson နဲ့ကိတ် Hudson
ကိတ် Hudson နဲ့မဿဲ Bellamy
ကိတ် Hudson နှင့်ဒန်နီ Fudzikava
ကိတ် Middleton မင်းသားဝီလျံနှင့်ဟယ်ရီနှစ်ပတ်လည်လန်ဒန်မာရသွန်၏ဂုဏ်အသရေ၏ဧည့်သည်များဖြစ်ကြသည်
ခရစ်မာတင်နှင့် Gwyneth Paltrow
ဆိုဖီ Brousseau Drake ကနေကိုယ်ဝန်အကြောင်းကိုဆိုပါတယ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကက်သရင်း Heigl အသစ်တစ်ခုကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အနာဂတ်မိခင်တွေလည်းများအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်
မင်းသမီး Michelle Williams က
Tarkan နှင့် Pynar Dilek
အယ်လ် Fahidi ခံတပ်
Shortbread cookies တွေကိုကိန်းဂဏန်း
တစ်ဦး waffle သံထဲမှာကြော်ပြွန်
မီးဖုတ်ထားသောရွှေဖရုံသီး - ထိပ်ဆုံး 12 အရသာပန်းကန်စိတ်ကူးများချက်ပြုတ်
Mambretsiya - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု